TPLF Gochaa Gara Jabinaa Naannoo Amaaratti Geechiseef Itti Gaafatamu Qaba
Bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti looltoota adda bilisummaa uummata Tigraay waliin hidhata qabaniin gocha gara jabinaa kan hokkara saalaa dabalatee gaggeeffame jechuun kan gareen Amnestii Intarnaashinaal gabaasse akkaan kan ishee yaaddeesse ta’u Yunaaytid Isteetes beeksiiftee jirti.
Gochi kunis kan gaggeeffame naannoo Cinaa fi Qobboo kan bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti yoo ta’u dhuma baatii Hagayyaa fi jalqaba baatii Fulbaanaa bara 2021 giddutti ta’u fi kunis humnootiin Tigraay baatii Adooleessa keessa eega nannoo sana to’atanii booda ta’uun gabaafamee jira. Humnaan gudeeddiin bal’inaan gageeffamu, namoota walitti qabanii ajjeesuu fi saamiinsii kan gaggeeffaman yoo ta’u kunis hospitaalootas kan dabalatuu ta’u Amnestii Intarnaashinaal keessatti itti aantuu daayreekteera biyyoota gaanfa Afrikaa fi biyyoota hara gurguddaa Saaraah Jaaksan ibsanii jiru. Qobboo keessatti looltonni Tigraay beekaa siviiloota hidhannoo hin qabne kan ajjeesan.Baatii Adooleessa bara 2021 kaasee naannoo Cinaatti humnootiin Tigraay shamarranii fi dubartoota gudeedan.
Amnestii Intarnaashinaal akka gabaaseetti hokkarri saalaa gaggeeffame gocha gara jabinaa kan rifaasisaa ta’e reebicha, ajjeesuuf sodaachisuu akkasumas arrabsoomaqaa gosaa xureessu kan dabalatee ture.
Namoonni gocha akkasii irraa lubbuun hafan akk jedhanti midhaa qaamaa fi qor-qalbii jabaatu irra ga’e.Amnestii intarnaashinaal duraan gochi wal fakkaataan dubartotaa fi shamarran bulchiinsa naannoo Amaaraa Nafaas Mawcaa keessa turan irratti looltoota Tigraayiin gaggeeffamu gabaasee ture.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa bakka adda addaa keessatti gabaasa gocha humnaan gudeeddii gaggeeffamu isaaf gabaasa qabatanaatu jira jedha Amneestiin.Qobboo fi Cinaa irraa jiraattonni Amnestii Intarnaashinaaliif akka ibsanti looltonni Tigraay mana jireenyaa, suqiwwan keessaa qabeenya isaanii hatuun kanneen qabeenya uummataa ta’anis kaan saamanii kan hafees mancaasuu dubbatn.
Kunis kiliinikii tajaajiila eegumsa fayyaa kennanii fi manneen barnootaa kan dabalatuu ta’u ibsan.Saamiinsaa fi miidhaan wirtuulee eegumsa fayyaa irra ga’e kanneen humnaan gudeeddii irraa hafanii fi jiraattonni naannoo isaanti wal’ansa fayyaa akka hin arganne ittisee jira.
Dubbii himaan ministrii dantaa alaa Amerikaa Need Praayis akka jedhanti gocha gara jabinaa itti fufuun wakitti bu’iinsii waraanaa dhaabuun barbaachisaa ta;u hubachiisa.Qaamoonni walitti bu’iinsa kana keessaa harka qaban hundumtuu hokkara akka dhaaban akkasumas gocha gara jabinaa xumuura akka itti tolchan, gargaarsa dhalanamaa lubbuu olchuuf ergamu akka hin seenne dhorkuun akka hafuu fi walitti bu’iinsa jiru karaa nagaan furmaanni akka argamu gaafachuu itti fuufna jedhan.
Kana malees hidhattonni gama hundaa dhiittaa mirga namoomaa fi hokkara siviiloota irra ga’u akka balaaleeffatan gaafanna kan jedhan Need Praayis rakkoo uumameef furmaata waaraa argamsisuuf qorannaa qabatamaan gaggeeffamekanneen badii dhaqqabsiisan itti gaafatamoo ta’an seera duratti akka dhiyaatan gochuun ejjennaa keenya ta’uun itti fuufa jechuu isaanii xuquun gulaalaan har’a yaada isaa xumuuree jira.